Blog of Nyein Chan Yar: Win innwa Unicode
Win innwa unicode ထွက်တာ ကြာပြီဆိုပေမယ့် download size ကြီးတော့ ဟိုတစ်နေ့ကမှ speed မြန်တုန်းလေးမှ download လုပ်ဖြစ်တယ်။ သုံးရတာကောင်းပါတယ်။ unicode 5.1 fontတွေနဲ့ character compatible ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ရရစ်ကို အရင်ရိုက်နေရ တယ်။ (အဟောင်း ကြိုက်သူများ၏အားပေးမှု ရမည်။) I don't like it. so ugly. People should type as they write.
၂။ ဂျေ (j) ﻿နေရာရှိ ရရစ် နဲ့ အားလုံးရပေမယ့် ရှေးက ဝင်းfont တွေရဲ့ လက်ကွက်မှာလို ရရစ်ပေါင်း တစ်သောင်း ခြောက်ထောင် ထည့်ထားတယ်။ (အဟောင်း ကြိုက်သူများ၏အားပေးမှု ရမည်။)
ဒီလိုပါပဲ အရင်တုန်းကလို စာလုံးတွဲတွေ (ဝဆွဲ-ဟထိုး လိုမျိုး တွေ) အားလုံး ထည့်ထားတယ်။ တစ်ခုချင်း ရိုက်လည်း ရပါတယ်။ backward compatible ဘာညာပြောလို့ရတာပေါ့လေ။
၁။ keyboard ပြောင်းဖို့ F7- F8 သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ Now, I don't need to press ctrl+shift twice to switch between three keyboards, (Eng, zawgyi, mm-unicode). I can use ctrl+shift just for zawgyi and Eng from now on.
၂။ ဇော်ဂျီစတိုင် tilde key နဲ့ ပါဌ်ဆင့်ရိုက်ရတယ်။ good for Zawgyi users။
၃။ ရှေးက ဝင်းfont တွေရဲ့ လက်ကွက်အတိုင်းမို့ အဟောင်း ကြိုက်သူများ၏အားပေးမှု ရမည်။ for diehard conservatives :P
Generally, it's quite good for an end user like me.
I like it :) If you want to download, file location is as follows coz I don't know where the web page of it is. http://winmyanmar.myanmars.net/winnwa5.2.exe 10.32 MB
Posted by dathana at Tuesday, February 09, 2010
Labels: font, mm-font, review
N Kai Ra